I-2019 Coronavirus (i-COVID-19) ichaphazela yonke intengiso yehlabathi. Ukongeza kwindleko zobomi bomntu, ifuthe lokusasazeka kwintsholongwane kuqoqosho lwehlabathi sele liqalisile ukwamkelwa kwaye linempembelelo enkulu kuthengiso lobuchwephesha behlabathi. Kule meko, imfuno yehlabathi yeiglavu zonyango inyuke kakhulu.Xa ixesha libalulekileyo lokuthintela nokulawula ubhubhane, iimaski kunye neiglavu zonyango zerabha zonyango zezona zixhobo zinqabileyo zokukhusela abasebenzi bezonyango abaphambili.
Imarike yegloves yotyando
Iiglavu zelatex ezenziwa ngonyango zifuna imeko yokhuseleko ephezulu. Ifuna inzalo ngakumbi kunye nokupakisha okuzimeleyo. Ikwanayo nemilo egobileyo yesandla ehambelana ngokusondeleyo neminwe emihlanu kwaye ikulungele ukunxiba. Nokuba ngexesha lokusebenza ixesha elide, ukulawulwa kokufuma okugqwesileyo kunokugcina ubume kunye nentuthuzelo yabasebenzi bezonyango abanxibe iiglavu, kwaye basebenze ngokukhuselekileyo izixhobo zonyango.
Ukhuphiswano kumgca wokuvelisa iiglavu
Umgca wemveliso yeiglavu zotyando zonyango kufuneka ubenendlela efanelekileyo yoyilo esekwe kwiipropathi zemichiza yezinto zokwenza izinto kunye nenkqubo yokwenza iglavu. Kwiminyaka yakutshanje, ngokuphuculwa koomatshini bokwenza iiglavu zelatex kunye nokongezwa kwezixhobo ezizenzekelayo, izithintelo kumzi-mveliso weiglavu ezilahlwayo ziye zenyuka zenyuka, ngakumbi kwicandelo leiglavu zonyango oluphezulu. Ibango liyaqhubeka nokukhula,bKukho abenzi abambalwa nabambalwa abenza imigca yeiglavu.
Ukongeza, ngenxa yeendleko eziphezulu zezixhobo zonyango ezilahlwayo zeiglavu zerhasi, kunye nenkxaso eyomeleleyo yabasebenzi kunye nezixhobo ezibonakalayo ziyafuneka kulwakhiwo lwezixhobo, abangenayo abatsha kufuneka babe namandla omeleleyo ezemali kunye nezixhobo zobugcisa ukukhuphisana neenkampani ezikhoyo .
Inkqubo yokuhamba kwemveliso
Isetyenziselwa ikakhulu imisebenzi efuna inqanaba eliphezulu lokuzala, njengokusebenza, ukuhanjiswa, ukubekwa kwindawo ebanzi yokuhambisa amanzi, ukulungiswa kwesisombululo esipheleleyo sezondlo zabazali, njl.
Egqithileyo Uluhlu lwemveliso yeiglavu zelatex
Okulandelayo: Umgangatho ophezulu we-China PU Glove Dipping Production Machine / Umatshini wokukhuphela weGlove ngokuzenzekelayo
Isikhuseli Ukwenza Machine
Latex isikhuseli Machine
Latex isikhuseli Ukwenza Machine
Latex Iziqhano Production Line